बीमोन चीनमा खेलकुद कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता मध्ये एक हो। हाम्रो खेल नेट कपडाको चौडाई १2२ सेमी छ र% ०% नायलॉन + १०% स्पानडेक्सले बनेको छ। तिनीहरूसँग बहु रंगहरू वैकल्पिक छन् र योग कपडा, खेलको लुगा, अण्डवियर, साइकलिंग लगाउने पोशाक, पौंडी पोशाक, शेपवेयर, इत्यादिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ बीमोन तपाईंको खरीदको लागि तत्पर छ!
स्पानडेक्स कपडा व्यापक रूपमा बुनेका छन्। सामान्यतया, सपाट बुने कपडा कभर यार्नको साथ उत्पादन गरिन्छ। ती कपडा वा तान्ने धागोमा प्रयोग गरिन्छ र यार्नका अन्य प्रकारका साथ बुर्ने वा कपडामा वा द्वि-दिशात्मक लोचयुक्त कपडाहरूमा १०-१-15% को सामान्य लोचको साथ अन्तरमा बुनिन्छ। लोचदार बुने कपडा, सामान्यतया कोट, प्यान्ट र अन्य उत्पादनहरू हुनसक्दछन्।
मोनोफिलामेन्ट रेयन कस्तो प्रकारको कपडा हो? मोनोफिलामेन्ट रेयन कस्तो प्रकारको कपडा हो? मोनोफिलामेन्ट रेयन एक प्रकारको एयर जेट उत्पादन हो, त्यसैले यसलाई पानी जेट उत्पादको रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिदैन। थप रूपमा, मोनोफिलामेन्ट रेयनको कच्चा माल भनेको विस्कोस स्टेपल फाइबर हो, जुन रासायनिक फाइबर उत्पादहरूको भन्दा ठूलो हुँदैन। तसर्थ, यस ग्रे रंगको कपडा उत्पादन गर्ने धेरै निर्माताहरू छैनन्। एक पटक यो फेब्रिकको खोजी पछि, निर्माताको आपूर्ति माग भन्दा कम हुनेछ, स्टकबाट बेच्न सजिलो हुन्छ।